Hindise Sharciyeedka Argigixisada: fal-argigixiso, koox argigixiso, Ku Biirista Iyo Awoodaha Baarista Iyo Xirista – Goobjoog News
e) Dhaawac ama dhibaato soo gaarta hantida dadweynaha ama hantida gaarka loo leeyahay, oo ay ku jirto goobo dadweynuhu isticmaalo, dhisme dawladeed, nidaamka gaadiidka dadweynuhu adeegsado, dhaawac gaara kaabayaasha ama degaanka;
h) In lagu hanjabo ama lagu sii daayo degaanka ama qeyb ka mid ah ama in lagu baahiyo ama loo banhigo dadweynaha ama qeyb kamid ah dadweynaha halis nooca ay doonto ha ahaatee, khatar, walax shucaac leh ama sun halis ah nooca ay doonto ha ahaatee;
i) Wax kasta oo loo qaabeeyey ama loola gol leeyahay in lagu carqaladeeyo nidaam kombuyuutar ama bixinta adeegyacla toos xiriir ula leh agabyacla kaabayaasha, isgaarsiinta, bangiyada ama adeegyada maaliyacleed, acleegyada korontada, biyaha iyo tamarta arna kaabayaasha kale ee muhiimka ah;
j) Wax kasta oo loo qaabeeyey ama loola dan leeyahay in lagu carqalacleeyo bixinta adeegyada degdegga ah ee muhiimka ah sida adeegga booliska, difaaca madniga ah ama adeegyada caafimaad ama weerar lagula kaco adeegyadan; iyo
k) Falalka loo qaabeeyey ama loola dan leeyahay in lagu carqalacleeyo, lagu xannibo hawlaha ciidamada Soomaaliya iyo xoogaga hubaysan ama weerar loo gaysto ama xad-gudub qalalaase wata oo lagu sameeyo xarumahooda, agabkooda ama gaacliidkooda.
4) Falalka ama hanjabaadaha falalka ku xusan faqraddal(a) ee qodobka iyaga oo aan hayn qaar ku gabood falaya xad-gudubyada ku xusan xeerka ciqaabta iyo waxyaalaha ku qoran qodobka 13”d iyo qodobka 14″ ee xeer-ciqaabeed ku dabaqmi doonaan marka la fiiriyo dhanka baaxadda waxyaalaha ku qoran xeerkan,
Marka la go’aaminayo in qof xubin ka yahay urur argagixiso iyo inkale, maxkamaddu waxay tixgalin kartaa arrirnahan soo socda:a) Haddii ay jirto sabab macquul ah oo lagu aamino in qofka la dacweeyey uu u hanqal taagayo mabaadi’da kooxdaas argagisida ah; b) Haddii eedaysanuhu isagoo og uu ka helay lacag ama agab urur argagixiso ah; c) Haddii eedaysanuhu uu qaatay magaca, midabka, astaanta, luqadda, calaamadda ama wax kale oo matala lalana xiriiriyo urur argagixiso; iyo d) Haddii eedaysanuhu isagoo og xiriir la yeesho xubno la ogyahay oo ka tirsan urur argagixiso ah.
1) bixiya tilrnaan ama tababar ku saabsan xirfad, xirfadahaas oo ay ku jiraan balse aan ku koobnayn –
2) Qof kasta oo hela tilmaamo ama tababar nooc kasta oo kamid ah xirfadaha lagu xusay faqradda(a) ee sare isagoo waqtiga uu tilmamaha ama tababarka qaadanayana ujeeddadiisu tahay in uu u adeegsado tilmaamahaas la siiyey fal-argagixiso ama arrimo la xiriira fulinta ama u diyaar-garowga falal argagixiso ama kuwa kale in ay fuliyaan falal noocaas ah qofkaasi wuxuu galay xad-gudub, wuxuuna mutaysan doonaa xabsi muddadiisu dhan tahay 10 (toban) sano ilaa xabsi daa’im.
1) Iyadoo la tixraacayo qodobada 18aad iyo 38aad ee Dastuurka ku-meel-gaarka ah iyo xaqa xorriyadda loo leeyahay in la cabbiro fikir, waxay noqonaysaa xad-gudub in qof si ula-kac ah:
a) Heshiis ama is-afgarasho kasta oo dhexmara laba qof ama ka badan si ay u fuliyaan “fal-argagixiso” ama fal kale oo xad-gudub ku ah sharcigan waxaa, iyadoo la eegayo qodobka 76′”d ee xeerka ciqaabta, loo ciqaabi doonaa in uu yahay shirqool in la fuliyo fal ama xad-gudub iyadoo haddii aan la fulin falkaas ama xad-gudubka ay weli ka dhalan doonto ciqaab xabsi muddo dhan 3 (saddex) ilaa 10 (toban) sano.
b) Qof kasta oo shirqool maleega isagoo la kaashanaya qof kale dalka Soomaaliya gudihiisa meel kamid ah si uu uga fuliyo fal meel ka baxsan dhulka Soomaaliya, kaasoo ah fal haddii lagu sameeyo Soomaaliya dhexdeeda noqon lahaa mid loo arko xad-gudub marka la fiiriyo sharcigan, waxaa loo arki doonaa qofkaasi in uu shirqool maleegay oo uu doonayey in uu falkaas ka fuliyo Soomaaliya dhexdeeda; iyo
(1) Qof kasta oo si ula-kac ah isugu daya in uu hor-joogsado, weeciyo ama buriyo cadaaladda waa qof xad-gudub ku kacay marka la fiiriyo xeerkan.
(2) Qof kasta oo markhaati ah ama sarkaal dawladeed ah oo ku lug leh dacwad socota oo sharcigani ku dabaqmo oo si ula-kac ah:
(c) ka joojiya ama isku daya in uu ka joojiyo in uu bixiyo caddeyn;
(d) ku qasba in uu keeno caddeyn been ah;
(a) Ugu raadiya taageero, amna siiya taageero agab ama ilo sida ku qeexan qodobka 3aad ee Sharcigan, urur agagixiso; ama si loo fuliyo fal argagixiso; ama
2. Taageerada, marka la fiiriyo faqradda 1 aad ee Qodobkan waxaa kamid ah, balse aan ku koobnayn:
(a) In la oggolaado in la bixiyo, amna bixiinta dokumentiyo safar oo la been abuuray iyadoo dokumentiyadaas la siinayo xubin ka tirsan koox argagixiso;
(b) In la oggolaado in la bixiyo, ama bixinta xirfad ama khibrad looga faa’iidaynayo, ama loo jihaynayo ama lala sameynayo koox argagixiso ah;
(c) Gelidda ama ku negaashaha dal si loogu faa’iideeyo iyadoo amar laga helayo ama xiriir lala leeyahay urur argagixiso ah gudaha iyo dibaddaba; ama
(d) Fal-dembiyeedyada ku xusan Xarfaha a, b iyo c ee farqadda 2aad ee qodobkan waxay isku si ugu dabaqmayaan argagixisada Soomaalida ah iyo ajnabigaba.
Xad–gudubyada ka dhanka ah badbaadada garoornada u adeega duulirnaadyo rayid ah
Iyadoo loo eegayo arrimaha soo socda ama marka ay cidi codsi uga gudbiso garsoore maxkamad gobol, oggolaansho ayaa la bixin doonaa lagu oggolaanayo ama lagu farayo in qofka ay ku socotaa uu hubiyo mid arna ka badan oo arrimaha soo socda ah:
Haddii dhaqso loogu baahdo, waxaa oggolaanshaha saxiixi kara saraakiisha ku xusan qodobka 21 and faqraddiisa s balse waa in uu 24 saac gudahood ku oggolaado garsoore maxkamad gobol.
Fiiro dheeraad ah waa in loo yeesho haddii:
c) Agaasimaha Guud ee Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soornaaliyeed; ama
d) Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
8) waxay noqonaysaa mas’uuliyadda qofka oggolaanshaha la siiyey inuu qaado tallaabooyin lagu dhaqan-gelinayo oggolaanshahaas hadba sidii suura-gal ugu ah.
9) Qofka si ula-kac ah aan ugu hoggaansarnin xilkiisa ku xusan qeyb-hoosaadka
wuxuu noqon doonaa mid gefay wuxuuna mutaysan doonaa haddii ay ku caddaato ciqaab xabsi oo aan ka badnayn 3 (saddex) bilood ama ganaax dhan US$5,000(shan kun doolarkaMareykanka)ama labadaba.
10) Oggolaanshaha hor-qabatayntu wuxuu noqon doonaa mid shaqeeya keliya muddo 3 (saddex) bilood ah. waxaa kordhin kara muddada maxkamad awood u leh iyadoo ku dari karta 3 (saddex) bilood oo kale haddii codsi ay hesho. Garsooraha rnaxkamadda awoodda lihi waa in uu ku qanco in kordhinta la raadsaday ay tahay mid muhiim ah lana jaan-qaadaysa qeyb-hoosaadka 3 iyo 4 ee sare ku xusan.
11) Waxay noqonaysaa mas’uuliyadda codsadaha in uu hubiyo, marka laga xaaladaha ku xusan qeyb-hoosaadka 12 ee hoose, in: reebo
1) Sarkaal kasta oo ka tirsan ciidamada amniga qof waa xiri karaa isagoo aan haysan oggolaansho maxkamadeed haddii uu hayo sababo macquul ah oo abuuraya tuhun ah in qofku sameeyey, sameynayo ama uu sameyn rabo fal-dembiyeed marka loo fiiriyo Xeerkan.
2) Qofka xeerkan lagu qabtay waxaa la hor keeni doonaa maxkarnad awood u leh rnuddo 48 saacadood gudahood ah ama maxkamadda ugu dhow halka qofkaas lagu qabtay.
3) Marka qofka la tuhunsan yahay la hor keenayo maxkarnadda, sarkaalka amnigu wuxuu u gudbin doonaa garsooraha warbixin kooban oo rnuujinaysa:
d) sababaha lama-huraanka ka dhigaya in la sameeyo muddo-kordhin baariseed si la-tuhunsanaha loogu sii hayo xarunta baarista.
Xarigga iyo Amarka xabsi-u-gudbin
a) In ay jiraan sababo meel-mar ah oo lagu rurnaysan karo in xabsiga oo lagu sii hayo qofka codsigu khuseeyo ay muhiim u tahay in la helo xogta loo baahan yahay iyadoo rnarkaas la su’aalayo ama la ilaalinayo xogaha loo baahan yahay; iyo
b) Baarista lagu sarneeyey qofka arrintu khusayso ay tahay mid loo sameeyey si wanaagsan oo dhaqso 3) arrin kasta oo baaris lagu sarneynayo qofka la tuhunsan yahay si loo dhammeystiro baarista waxay noqon doontaa ugu badnaan 90 (sagaashan) maalmood, iyadoo shuruuddu tahay in wadarta tirada maalmaha la haynayo qofka inta aan dacwad lagu soo oogin aanay ka badnaan karin 90 (sagaashan) rnaalrnood, haddii aan muddo kordhin laga helin maxkamad awood u leh. Toddobaad kasta waa in maxkamadda lagu wargeliyaa halka dacwaddu marayso, iyadco maxkamadda laga codsan karo muddo-kordhin macquul ah.
a) aanay jirin sabab macquul ah oo lagu aarnino in qofka la tuhunsan yahay ku kacay ama ku lug lahaa si kastaba wax fal-dembiyeed ah marka la fi.iriyo xeerkan; ama
b) aanay jirn dacwad lagu soo oogay qofka la tuhunsan yahay taasoo la leeyahay ruxuu fuliyey dembi marka la fiiriyo xeerkan muddo aan ka badnayn 60 maalmood gudahood laga soo bilaabo taariikhda amarka xar1gga.
Sarkaal darajada uu doono leh ayaa qaadi kara muunadda ku xusan qodobka (d) iyo(e).
8 .. Adeegsiga muunadda: faraha amna muunadda lagu qaaday qaab qodobkan waafaqsan iyo xog kasta oo lagu helay muunadahan waa la haynayaa, cidina uma adeegsan karto ujeeddo ka duwan baarista argagixisada ama ujeeddooyin la xiriira ka-hortagga ama ka war-helka fal-dembiyeed kasta, baarista fal- dembiyeedka arna dacwad-oogista.
(c) sarkaal hubineed uu aaminsan yahay in joogista qofkaas ee dekedda ama xuduuddu ay xiriir la leedahay gelidda iyo ka-bixidda Soomaaliya, markab dushiisa ama diyaarad codsi ka soo gudbistay meel kasta oo karnid ah Soomaaliya gudo iyo dibad kii uu doonaba.
Sarkaal amni wuxuu adeegsan karaa awoodihiisa ku xusan qodobkan ha u muuqato amna yaanay u muuqan sabab uu uga shakin karo in qofkaasi xiriir la leeyahay sameynta, diyaarinta ama fududaytnta fal argagixiso.
(b) siiyo sarkaalka hubinta marka uu codsado baasaaboor shaqaynaya oo sawir wata ama dokumenti kale oo sugaya aqoonsigiisa;
Sarkaalka baaraha ah ee su’aal weydiiya qofka hab waafaqsan faqradda 1 and , wuxuu si uu u go’aamiyo in uu yahay qofka ku lug lahaa diyaarinta, fulinta ama fududaynta falka argagixiso:
Sarkaalka baaristu wuxuu qaban karaa wax kasta isagoo waafajinaya faqradda 3aad (d) ee sare, ama wax kasta oo la baaray ama lagu helay baaris hab waafaqsan faqraddaaas ee sare ama lagu hubiyey faqradda 6aa0 ee sare:
ii) Sarkaal Nabad-sugid
Hantida lala wareegay dawladda ayaa yeelanaysahaddii aan cid kale oo sheeganaysa aysan ka qaadan racfaan maxkamadda muddo 90 (sagaashan)maalmood gudaheed ah
La-wareegista – Guud ahaan
Xafiiska Xeer-ilaalinta Guud ee Qaranka wuxuu weydiisan karaa maxkamadda awoodda u leh la-wareegidda hanti lagu milkiyey ama lagu maamulo magaca koox argagixiso ah ama loo adeegsado ama loola dan leeyahay adeegsiga gabi ahaan ama qeyb ahaan fulinta fal argagixiso.
2. Xafiiska Xeer-ilaalinta Guud Qaranka wuxuu codsi u gudbin karaa Maxkamadda awoodda u leh isagoo dalbanaya in si ku-meel-gaar ah loo joojiyo arrimaha la xiriira dhamrnaan lacagaha ama hantida kale ee ay leedahay, cid ku leedahay ama lagu hayo magaca:
(b) Qof mucayan ama gaar ah oo looga shaki qabo in uu xubin ka ya.hay koox argagixiso ah, ama
(i) Bangiyada, hay’adaha maaliyadda iyo kuwa ka ganacsada lacagacaha caddaanka ah;
(ii) Cid kasta oo kale oo danaynaysa amna saarnayn ay ku yeelanayso arrintu; iyo
Ku-Dhawaaqidda Koox Argagixiso ama Cid La Cayimay
‘Hababka Baarista‘ waxa ku mid ah sida; lafa-gurka faraha la sawiray, lafa-gurka hidde-sidaha (DNA), goobta uu yaallo teleefanka gacanta, lafa-gurka maqal iyo muuqalka ah, baarista goobta dembigu ka dhacay, baarista sawirrlada la xiriira, lafa-gurka calaamadaha qoryaha gacanta iyo qalabka,lafa-gurka gumacyada, baarista maydka, dabagalka lafa-gurka kiimikada,
2- Cid kasta oo ay caddaato in ecdaynta loo soo jeediyey aysan aasaas lahayn kana soo gaarto waxyeello-sharafeed iyo hantiyeed, wuxuu xaq u yeelanayaa, raalli- gelin, mag-dhaw u dhigma dhibaatada gaartey.
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaallada Puntland iyo Al-shabaab Ee Ka Socda Gobolka Nugaal
Tjuqpm wwdekd Cialis buy online cialis 20 mg price
Txcwiz txzhdj viagra 50mg price of cialis
Dtfunl umbzwv Get viagra walmart pharmacy
Yffvhs strzmw rx pharmacy Snlac
Pgfyqr mmlnyi canada pharmacy Vyzkn...
Zhcmho fmkqrp online pharmacy Ergtf...